पैसालाई कसरी बनाउने संक्रमणरहित ? - Deshko News Deshko News पैसालाई कसरी बनाउने संक्रमणरहित ? - Deshko News
पैसालाई कसरी बनाउने संक्रमणरहित ?
नेपालले पनि पैसालाई सङ्क्रमणरहित बनाउन प्लाज्मा आयोन टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने अहिले आवश्यकता रहेको इञ्जिनीयर राम बाडेको भनाइ छ। ‘पैसाबाट हुने कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि बैङ्कहरुले प्लाज्मा आयोन टेक्नोलोजीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भने। पैसालाई सङ्क्रमणरहित बनाउनका लागि यस्ता उपकरणको प्रयोगमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट